Wararka Suuqa Maanta: Salah oo Mustaqbalkiisa Ka Hadlay, Man City oo ku biirtay Tartanka Antony, iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Salah oo Mustaqbalkiisa Ka Hadlay, Man City oo ku...
Wararka Suuqa Maanta: Salah oo Mustaqbalkiisa Ka Hadlay, Man City oo ku biirtay Tartanka Antony, iyo Qodobo kale
Tababarihii hore ee Juventus , Chelsea iyo Inter Milan Antonio Conte ayaa “xiisaynaya” inuu qabto shaqada Manchester United haddii kooxda Premier League ay ceyriso tababare Ole Gunnar Solskjaer. (DailyStar)
Tababarihii hore ee Roma Paulo Fonseca, oo 48 jir ah, ayaa lagu wadaa in loo magacaabo tababaraha Newcastle ka dib markii tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard uu ka haray tartanka loogu jiray bedelka Steve Bruce ee St James Park. (Mirror)
Everton ayaa isku diyaarineysa inay u dhaqaaqdo xiddiga Inter Milan iyo xulka Chile Alexis Sanchez oo 32 jir ah, iyadoo weeraryahankii hore ee Arsenal iyo Manchester United uu xor u yahay inuu ka tago kooxda Talyaaniga bisha Janaayo. (InterLive )
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo Netherlands Donny van de Beek, oo 24 jir ah, ayaa wakiilkiisa weydiistay inuu u xaqiijiyo inuu u dhaqaaqo Real Madrid . (DefensaCentral)
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa sheegay in uu ku dhacay dabinka markii uu ka hadlayay Blues in ay kala hadlayaan u dhaqaaqista weeraryahanka Borussia Dortmund iyo xulka Norway Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah (Goal).
Juventus ayaa isha ku heysa inay u dhaqaaqdo 27-jirka Chelsea iyo Spain ee Kepa Arrizabalaga xagaaga soo aadan. (Fichajes)
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ma adeegsan doonto ikhtiyaarkooda £ 34m si ay si joogto ah ula soo saxiixato 26-jirka qadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez. Xiddiga reer Spain ayaa ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho tan iyo markii uu amaah ugu soo biiray Blues bishii August. (La Razon)
Daafaca England Chris Smalling, oo 31 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu ka mid noqdo dhowr ciyaartoy oo ka tagaya Roma bisha Janaayo. (Calciomercato)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee xulka Spain Xavi, oo ah maamulaha kooxda Al Sadd ee Qatar, ayaa sheegay inuu horay u diiday inuu qabto xilka tababarenimo ee kooxdiisii ​​hore ee Barcelona maadaama uu “kaliya ahaa tababare muddo saddex bilood ah” laakiin hadda uu dareemayo inuu diyaar u yahay inuu tababaro koox kasta oo adduunka ah. ” (Marca)
Daafaca Leicester iyo France ee 21 jirada Wesley Fofana, 20, ayaa xiiso ka helaya Manchester United iyo Newcastle . (Butfoitballclub.fr)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa diidi doona dalab kasta oo ku aaddan iibinta weeraryahanka reer France Alexandre Lacazette oo 30 jir ah bisha Janaayo, wuxuuna u oggolaan doonaa inuu si bilaash ah ku baxo marka qandaraaskiisu dhammaado xagaaga. ( thesun)
Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa si isa soo taraysa ugu kalsoon inay la soo wareegi doonaan 28 jirka Chelsea iyo daafaca dambeedka dhexe ee Antonio Rudiger, kadib wadahadalo qandaraas oo ay la galeen Blues.waxa ay gaadheen ismariwaa. (ESPN)
Muhiimada Rudiger waa inuu la sii joogo Chelsea , laakiin loolanka saxiixiisa “waa furan yahay”. (Fabrizio Romano)
Manchester City , Tottenham , Liverpool iyo Newcastle ayaa dhamaantood xiiseynaya garabka reer France Ousmane Dembele, oo 24 jir ah, kaasoo ay u badan tahay inuu ka tago Barcelona xagaaga soo aadan. (90min)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Harry Winks, oo 25 jir ah, ayaa shaki galiyay mustaqbalkiisa Tottenham ka dib markii uu qirtay inuu ku dhibtoonayo inuu dib u soo ceshto qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa isagoo qeyb ahaan ka hoos ciyaaraya macalin Nuno Espirito Santo. (Thetimes)
Kabtanka Newcastle ahna daafaca reer England Jamaal Lascelles, oo 27 jir ah, ayaa sheegay in ciyaartoydu ay tahay inay qaataan mas’uuliyadda ceyrintii Steve Bruce. (Mirror)
Manchester City ayaa diyaar u ah inay kula biirto Barcelona tartanka loogu jiro saxiixa 21 jirka garabka ka ciyaara ee reer Brazil Antony oo ka tirsan Ajax . (El Nacional)
West Ham iyo Southampton ayaa xiiseynaya xiddiga qadka dhexe ee weerarka uga ciyaara Sassuolo Filip Djuricic, oo 29 jir ah, kaasoo qeybtii dambe ee xilli ciyaareedkii 2014-15 amaah ku qaatay Saints. (Calciomercato – af Talyaani)
Previous articleCiidamada ammaanka iyo rag hubeysan oo ku dagaalamay Bakaaraha
Next articleXavi: Markii Barcelona ila soo Xiriirtay, waxaan ahaa tababare saddex bilood oo kaliya, hadda Diyaar ayaan Ahay
Photo/Getty Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u soo gudbineyso weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah , kaasoo ku lug yeelan doona Eden...
Rasmi: Xidiga Ku Guuleestay Abaalmarinta Golden Player 2021 oo lagu Dhawaaqay
Wararka Suuqa Caawa: Chelsea oo Dalab ka gudbisay Eder Militao, Mauro...